Tanjona itodiana: ny lanitra
"Fa fantatsika fa … manana izay voarafitr’Andriamanitra isika, dia trano tsy nataon-tànana izay maharitra mandrakizay any an-danitra." 2 Korintiana 5:1
"Mifalia, satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo."Lioka 10:20
Sisa nanamborana avy tao amin’ny toby fanagadrana tao Ravensbrück i Corrie Ten Boom, ary nitety izao tontolo izao mba hanambara ny fitiavan’i Jesosy Kristy, fitiavana tsapany nandritra ireo fotoana nangidy indrindra tamin’izy voafonja. Nohararaotiny ny fotoana rehetra nahafahany nampita ny hafatra tiany hampitaina, ary indraindray aza dia narahiny teny mampitsiky izany.
Indray andro, raha nanomana ny diany hiverina any Hollande izy, rehefa avy nitety ny firenena Tatsinanana, dia nanao famandrihan-toerana tamina sidina misy fiatoana maro : Hong-Kong, Sydney, Auckland, Le Cap, Tel-Aviv ary Amsterdam.
- Aiza moa ny fitodiana farany halehanao? hoy ilay mpiasa.
- Ny lanitra, hoy i Corrie.
Sadaikatra ilay mpikarakara : - Ahoana no fanoratra izany, azafady? Notononon’i Corrie ny litera tsirairay: - L, A, N, I, T, R, A.
Nieritreritra kely ilay mpikarakara, dia nitsiky ka niteny tamin’i Corrie hoe: - Hay, azoko ny tianao hambara ! Fa tsy izay no nanontaniako anao.
- Izay anefa no tao an-tsaiko. Saingy tsy mila manao famandrihana aho, fa efa manana tapakila.
- Efa manana tapakila handehanana any an-danitra hoe ianao? Ahoana no nahazoanao izany?
- Roa arivo taona lasa tany ho any izay, hoy i Corrie, dia nisy Olona nandoa ny saran’io tapakila io. Tsy nisy nataoko afa-tsy ny nanaiky izany. Jesosy no anaran’Ilay nanao soa ahy, ary Izy no nandoa ny saran’ny diako, tamin’ny nahafatesany teo amin’ny hazofijaliana noho ny fahotako. Dia nanampy i Corrie hoe: Amin’ny ankapobeny, raha tsy manao famandrihana, dia sarotra ny mahazo toerana amin’ny fiaramanidinareo. Kanefa mbola sarotra lavitra noho izany, raha ho any an-danitra. Manantena aho fa hamandrika ny toeranao ianao.